စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နနွင်း - Hello Sayarwon
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နနွင်း
ဟင်းချက်တဲ့အခါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုလေ့ ရှိတဲ့ အရောင်အသွေး ဝါညက်ညက်လေး နဲ့ ဟင်းရဲ့ အနံ့ကိုရော အရောင်အဆင်းကိုပါ တိုးစေတဲ့ မီးဖိုချောင် ထဲက ဆေးဖက်ဝင် ဟင်းခတ် တစ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေသလို စိတ် ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ပြုပေးပါသတဲ့။ စိတ်ကျန်းမာရေး အတွက် နနွင်းက ဘယ်လို အထောက်အကူ ပြုပေးလဲ သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
နနွင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင်။
အာရှ ဟင်းလျာတွေကို အရောင်အသွေး လှပစေတဲ့ နနွင်းမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင် ကြွယ်ဝသလို ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်း တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ curcumin ပါဝင်နေ ပါတယ်။ နနွင်းကို ရှေးယခင် ကာလတွေကတည်း ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရာ တစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ ကြတာပါ။
နနွင်းက အသားအရေ ကျန်းမာ စေတာ။ ကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေတာ အပြင် အဖြစ်အများဆုံး စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာဖြစ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
နနွင်းက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေတယ်လား။
နနွင်းမှာပါတဲ့ curcumin က ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ခု အနေနဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်လေလေ ကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်လေလေပါ။
မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းမှုတွေက စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက် တိတိကျကျ မထုတ်ပေးနိုင်သေးပေမယ့် ရောင်ရမ်းမှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ကြားမှာ ဆက်စပ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။
နနွင်းမှာပါတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ curcumin က နာတာရှည် ရောင်ရမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေဖို့ အထောက်အကူ ပြုပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် နနွင်း ပုံမှန် စားသုံးပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုကို အကောင်းဆုံး တိုက်ဖျက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း တစ်ခုပါ။
နနွင်းရဲ့ အရောင်အသွေး ဖြစ်တဲ့ အဝါရောင် ညက်ညက်လေးက စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တာပါ။ အရောင်အသွေး အရရော ပါဝင်နေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ curcumin ကပါ စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ စိတ်ပျော်ရွှင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာချင်တယ် စိတ်ဓာတ်ကျမှု ကင်းချင်တယ် ဆိုရင် နနွင်းကို ပုံမှန်လေး စားသုံး ပေးစေချင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာချင်တယ် ဆေးတွေလည်း မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင် နနွင်းကို စိတ်ဓာတ်ကျမှု သက်သာစေဖို့ သဘာဝ ကုထုံးအဖြစ် အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
Can You Use Turmeric to Help Treat Depression? https://www.healthline.com/health/depression/turmeric-for-depression Accessed Date 27 July 2020
Turmeric for Depression & Anxiety: Is CurcuminaGood Antidepressant? https://lyfebotanicals.com/health/turmeric-for-depression/ Accessed Date 27 July 2020
Study Shows Turmeric Can Reduce Symptoms of Depression, Anxiety https://www.prnewswire.com/news-releases/study-shows-turmeric-can-reduce-symptoms-of-depression-anxiety-546535422.html Accessed Date 27 July 2020